May 30, 2021 - Pardeshi Khabar
जेठ १६,काठमाडौं ।गैरआवासीय नेपाली सङ्घ (एनआरएनए) ले ‘एनआरएन द सिङ्गर’ शुरु गर्न लागेको छ । विश्वभरि छरिएका नेपाली प्रतिभालाई चिनाउने र विश्वभर स्थापित गर्ने उद्देश्यका साथ शुरु गर्न लागिएको हो। प्रवासमा रहेका नेपाली कलाकारहरुको पहिचान गर्ने ‘साङ्गीतिक रियालिटी शो’ आगामी असार ७ गतेदेखि शुरु हुने आयोजकले जनाएको छ । प्रतियोगितामा नेपाल र सार्क मुलुकबाहेक सबै राष्ट्रमा छरिएर रहेका १५ वर्षभन्दा माथिका नेपालीभाषीले भाग लिन पाउनेछन् । प्रतियोगिताको निर्णायक मण्डलमा वरिष्ठ सङ्गीतकार शम्भुजित बाँस्कोटा, गायक शम्भु राई, गायिका शर्मिला बर्देवा तथा एनआरएनएका पूर्व अध्यक्ष तथा नियात्राकार जीवा लामिछाने रहेका छन् ।फुर्सदमा
आफ्नो जन्मभूमी खोटाङलाई सम्झे,यूकेबासी नेपालीले
जेष्ठ १६, लण्डन । खोटाङ् सेवा समाज (खोसेस) यूकेले भर्चुअल माध्यमबाट सर्वपक्षिय अन्तक्रिया कार्यक्रम गरेको छ । खोसेसले खोटाङ्का कृयाशील राजनीतिक दलका प्रमुख, स्थानिय निकायका जनप्रतिनिधि, जिल्लाका सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखहरु, जनप्रतिनिधिहरु र पत्रकारहरुको सहभागितामा सर्वपक्षिय भर्चुअल माध्यममा अन्तक्रिया कार्यक्रमको आयोजना गरेको हो । कार्यक्रममा जिल्लामा कोरोनाको असर, स्थानीय स्तरबाट भइरहेका नियन्त्रणका प्रयासहरु र खोसेसद्वारा जिल्लाबासीलाई गरिने सहयोगको पारदर्शिता र प्रभावकारीताका विषयमा छलफल भएको थियो । खोसेस यूकेका अध्यक्ष डा. प्रमोद राईको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा नेकपा माओवादी केन्द्रकी केन्द्रीय सदस्य एवम् संविधान सभा सदस्य दुर्गा जयन्ती राई, जिल्ला समन्वय समिति प्रमुखफुर्सदमा
ताजा खबर, परदेशी समाचार, प्रवास, फोटो ग्यालरी, राष्ट्रिय समाचार No Comments »
Post by: परदेशी खबर प्रकाशीत मिति: May 30, 2021
काठमाडौं : विवेकशील साझा पार्टीका पूर्वअध्यक्ष उज्वल थापाको स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर बनेको छ । थापाको स्वास्थ्य अवस्थाबारे जानकारी दिँदै साझा पार्टीका अध्यक्ष रवीन्द्र मिश्रले स्वास्थ्यमा सुधार नआएको बताए । डाक्टरहरुले सकेको गरिरहेको त अवस्थामा कुनै सुधार नआएको मिश्रले जानकारी दिएका छन् । ‘उज्वलजीको स्वास्थ्य अवस्थामा कुनै सुधार आएको छैन र अवस्था अत्यन्तै गम्भिर छ’, मिश्रले फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘डाक्टरहरूले सकेको गरिरहेका छन्।’ विवेकशील साझा पार्टीका संयोजक मिलन पाण्डेका अनुसार थापाको मेडिसिटी अस्पतालको भेन्टिलेटरमा इक्मोको सहायताले उपचार भइराखेको छ । ‘हिजोदेखि उज्ज्वल दाइको स्वास्थ्य अवस्थामा सुधार भएको छैन’, संयोजक पाण्डेले भने,फुर्सदमा
गैर आवसीय नेपाली संघ कुवेतको नेतृत्वमा मध्य पुर्वको अक्सिजन सिलिण्डर अभियानलाई झन्डै १७ लाख सहयोग
युग लामा / कुवेत – गत मे २८ शुक्रबार दिन कुवेत सिटीमाअक्सिजन सिलिन्डर सहयोगार्थ – संकलन अभियान समाप्त र त्यस अभियान अन्तर्गत हिसाबकिताब सार्वजनिक गर्न गैर आवसीय नेपाली संघ, NRNA-NCC कुवैतले पत्रकार सम्मेलन गरी हिसाबकिताब सार्वजनिक गरेका छन । मध्यपुर्व NRNA को नेत्रित्वमा खाडी राष्ट्रमा अक्सिजन सिलिण्डर पठाऔँ, आफन्तको ज्यान बचाऔं एक अभियान चलाएको थियो । यो अभियानले ५६० वटा अक्सिजन सिलिण्डर ओमनबाट नेपाल पठाएको पठाइ सकेका छन । कुवेतमा कृयाशिल ४६ संस्थाहरुबाट १९५५. ५०० KD र ब्यक्तिगत तर्फबाट १७० जनाबाट १९१८. ७५० KD ब्यक्तिगत र संस्थागत गरीफुर्सदमा
जेठ १६,काठमाडौं । नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोली इराकसँग मैत्रीपूर्ण खेलमा ६–२ ले पराजित भएको छ । शनिबार बसरास्थित अल्फायहा अन्तर्राष्ट्रिय मैदानमा नेपाल इराकसँग हारेको हो । इराकविरुद्ध पहिलो हाफमा ४–२ ले पछि परेको नेपालले दोस्रो हाफमा दुई गोल खायो । इराकलाई जित दिलाउन अयमन हुसेन गबधनले दुई गोल गरे । त्यस्तै, कप्तान अला अब्दुल जहर खासिन, मोहमद अब्दुल्जारा ओबेद, मोहनद अलि र सजाद जासिमले एक/एक गोल गरे । नेपालका मनीष डाँगीले एक गोल फर्काउँदा इराकका अहमेद इब्राहिम खलाफले एक आत्मघाती गोल गरेका थिए । मनीषले राष्ट्रिय टोलीबाट डेब्यु खेलमै गोलफुर्सदमा